Dawladda Hoose Garoowe oo lagu eedeyey wax qabad la’aan. – Bosaso Times News
Dawladda Hoose Garoowe oo lagu eedeyey wax qabad la’aan.
admin August 12, 2017 Dawladda Hoose Garoowe oo lagu eedeyey wax qabad la’aan.2017-08-12T10:58:53+00:00 Puntland No Comment
Dadweynaha magaalada Caasimadda ee Garoowe ayaa ku eedeyey dawladda hoose inaysan waxbadan ka qaban hawlaha asaasiga ah ee loo igmadday. Dadweyne farabadan ayaa aaminsan in dawladda hoose ay ku guuldaraysatay inay wax ka qabato ururinta qashinka iyo nadaafada guud.
Waxaa isha dadka marwalba qabataa qashin xaafadaha dhexdooda yaal, luuqyada ka buuxa, jidadka la maro dhinacooda yaal kuwaas oo dhamaan ah hawlaha loo igmadday dawladda hoose inay wax ka qabato.
Waxaa kaloo jira shiraddo ka shaqeeya nadaafada oo ururiya qashinka, kuwaas oo lacag bile ah ka qaada guryaha iyo meheradaha qashinka ay ka qaadaan. Shirkaddaha qashinka qaada ayaa ku andacoonaya in aysan wada shaqeyn buuxda ka helin dawladda hoose sidaa awgeedna ay iyagu wixii tabartooda qabtaan.
Shirkadda ugu weyn ee ka jirta Garoowe waa shirkadda Daryeel Deegaan oo qalabkii loo baahna iyo gaadiidkiiba haysata jecelna inay hawlaha kale ee dawladda hoose ku guul daraysatay ay waxka qabato hadii loo ogolaado.
Dawladda Hoose ee Garoowe ayaa lagu eedeynaya inaysan meel marin balamaha ay qaaday ee ilaalinta deegaanka iyo nadiifinta magaalada caasimada ah.
http://www.bosasotimes.com/dawladda-hoose-garoowe-oo-lagu-eedeyey-wax-qabad-laaan/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/08/DuqaGaroowe.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/08/DuqaGaroowe-150x150.jpg 2017-08-12T10:58:53+00:00 adminPuntlandCaasimada Puntland,Garoowe,QashinDadweynaha magaalada Caasimadda ee Garoowe ayaa ku eedeyey dawladda hoose inaysan waxbadan ka qaban hawlaha asaasiga ah ee loo igmadday. Dadweyne farabadan ayaa aaminsan in dawladda hoose ay ku guuldaraysatay inay wax ka qabato ururinta qashinka iyo nadaafada guud. Waxaa isha dadka marwalba qabataa qashin xaafadaha dhexdooda yaal, luuqyada ka...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
Caasimada Puntland, Garoowe, Qashin
« Qaybta-2.. Macmiil Dulmane Xaqaagii xagee jiraa?
Maxamed Faarax oo guul daraystay markii ugu danbeeysay oradka 5,000 »